Iincwadi ezisibhozo ezinkulu zolwaphulo-mthetho ezibekwe kwiKrisimesi | Uncwadi lwangoku
IKrisimesi iba yindawo yolwaphulo-mthetho kolu khetho lweenoveli zamayelenqe.
IKrisimesi, ethiyiweyo okanye ethandwayo, ishiya kungekho mntu ungakhathaliyo kwaye oku kuboniswa ngababhali beenoveli ezinkulu abangakwazanga ukumelana nokubeka enye okanye nangaphezulu yeenoveli zabo ngexesha leKrisimesi.
Bazimisele ukungabaniki ukuphumla abecuphi okanye ababulali, phantse bonke bengakhathali kumoya weKrisimesi, bayayeka ekubekeni ixesha kwaye bangene bangene kwikona nganye yamabali abo. Krisimesi Ewe ngokunjalo, uphuma udyojwe ligazi, emva kokugqitha kumaphepha abalobi ababalaseleyo bohlobo olo.
Nayiphi na kubo, ugqibelele ukuphinda ufunde kula maqela.
1 IKrisimesi ebuhlungu, nguAgatha Christie
2 Ixesha elidlulileyo libuyela eConnemara, ngu-Anne Perry
3 Ubusuku obuthuleyo, uMary Higgins Clark
4 Isela leKrisimesi, nguMary Higgins Clark
5 IiAdventures zeBlue Carbuncle, ngu-Arthur Conan Doyle
6 Inenekazi leLake, nguRaymond Chandler,
7 IKrisimesi kaMaigret, nguGeorges Simemon
8 IKrisimesi eyahlukileyo, nguJohn Grisham
IKrisimesi ebuhlungu, nguAgatha Christie
Kudlala umlinganiso I-Poirot, yi Elinye lawona mabali anegazi kwiNenekazi eliKhulu loLwaphulo-mthetho. Wazinikezela kumlamu wakhe uJames owayekhalaza esithi ukubulala kwiinoveli zakhe kuya kusiba ngcono nangakumbi. Usozigidi, uMnu Lee, ubulewe ngobusuku obandulela iKrisimesi. Abantwana bakhe abahlanu, bahlanganisene endlwini ngeholide, baba ngabarhanelwa.
Ixesha elidlulileyo libuyela eConnemara, ngu-Anne Perry
Izicwangciso NguEmily Radley, Umkhwekazi kaTomas Pitt, NgeKrisimesi baya eziqwenga xa iindaba zifika kuye ukuba uMakazi wakhe uSusannah uyafa. Nangona babengenabo ubudlelwane obukhulu, uEmily wagqiba kwelokuba aye eIreland ukuba ampheleke ngemihla yakhe yokugqibela. Nangona kunjalo, xa efika eConnemara, kuyacaca ukuba uSusannah unenkxalabo enkulu kunempilo yakhe.
Izinto ziya ziba mandundu xa uDaniel, osindileyo ekuphukeni kwenqanawa okubangelwe yenye yezaqhwithi zommandla, efuna indawo yokuhlala kwaSusannah. Akamkelekanga kwaphela edolophini, kwaye uEmily uyakuqonda oku njengoko efumanisa ukufana okungaqhelekanga phakathi kwetyala lakhe kunye nokufa okungasombululwanga komnye umfana, uConnor, kwiminyaka eliqela eyadlulayo.
USusannah, enomdla wokufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kuConnor ngaphambi kokuba asweleke, ucela uEmily ukuba aphande. A) Ewe, Uya kufumanisa ukuba abanye babahlali bazimisele ukwenza nantoni na ukugcina iimfihlo zabo zikhuselekile.
Ubusuku boxolo, UMary Higgins Clark
UCatherine Dornan kunye nabantwana bakhe ababini balungiselela ukuchitha ikrisimesi ebabayo eNew York, njengoko umyeni notata wakhe befanele bajongane notyando olubuthathaka. Kodwa into abangacingi ukuba yiyo Ngosuku olwandulela iKrisimesi luya kujika lube liphupha elibi ukususela kumzuzu wakho, msulwa, eweBema ekoneni ukumamela iingoma zeKrisimesi kwaye bazifumene babandakanyeka kuthotho lolwaphulo-mthetho kubandakanya ukuxhwilwa komntwana, ukubaleka kwegazi, kunye nogqatso olunomdla ngokuchasene nexesha ...
Ngaba ababulali bomoya weKrisimesi baya kubamba? Ngokwee-greats zenoveli yolwaphulo-mthetho, impendulo ithi: Hayi.
Isela leKrisimesiNguMary Higgins Clark
Kubhalwe kunye nentombi yakhe, uCarol Higgins Clark.
Umthi uya kugawulwa eVermont, ukuze kamva ugqitywe iZiko laseRockefeller ngeKrisimesi. Kodwa umthi okhethiweyo uqulethe imfihlakalo endala exabisekileyo ebandakanya amasela, abaphaphileyo kunye noosozigidi. I-tangle eyandayo enobungozi, kwindlela yeedayimane ezixabisekileyo.
Iintlobo zeblue carbuncle, Ngu-Arthur Conan Doyle
Kweli bali, UWatson undwendwele umhlobo wakhe uSherlock Holmes ukuya kuvuyisana naye ngeKrisimesi.
“Kwiintsuku ezimbini emva kweKrisimesi, ndadlula ndaya kutyelela umhlobo wam uSherlock Holmes ngenjongo yokudlulisela kuye amazwi okuvuyisana aqhelekileyo ngelo xesha. Ndamfumana elele esofeni, ephethe ingubo emfusa, irayipi ngasekunene, kunye nemfumba yamaphepha-ndaba amdaka, ekucacayo ukuba ebefunda nje, kufutshane. Ecaleni kwesofa kwakukho isitulo somthi, kwaye ukusuka kwikona enye yomqolo kwakuxhonywe umnqwazi owonakeleyo nonxungupheleyo, onxibe kakhulu ngokusetyenziswa kwaye wophuke kwiindawo ezininzi. Iglasi yokukhulisa kunye nezinto ebezisetyenziselwa ukuhlala ngasemva zishiye esihlalweni zibonise ukuba umnqwazi uxhonyiwe apho ukuze kuhlolwe kuwo. "
Kwaye umfumana ebhaptiziwe kuphando lwetyala ilula kwaye icacile. Kuyabonakala ngaphandle komdla.
«- Ngokuchanekileyo, ngoDisemba 22, kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo. UJohn Horner, umntu owayesebenza ngemibhobho yamanzi, watyholwa ngokuthabatha kwibhokisi yamatye enenekazi. Ubungqina obabuchasene naye babunamandla kangangokuba eli tyala ngoku liye enkundleni. "
Inenekazi leLake, nguRaymond Chandler,
Kule noveli, enye yeempumelelo ezinkulu zikaChandler, umcuphi UPhilip Marlowe uphando ngokunyamalala kwabafazi ababini: UCrystal Kingsley, umfazi kasomashishini osisityebi, kunye noMuriel Chess, umfazi womgcini welifa laseKingsley eLake Fawn Lake.
UMarlowe akakhathali nokuba kwenzeke ntoni kubo, kodwa ukufumanisa inyani kuya kuba yimfuneko xa eyiqonda loo nto ubomi bakho busemngciphekweni.
IKrisimesi kaMaigretNguGeorges Simemon
Ngenye intsasa ye IKrisimesi apho uMaigret kunye nenkosikazi yakhe babelungiselela ukuyichitha kunye kwaye emva kwemini uye kwimiboniso bhanyabhanya, kufike abafana ababini abasebenza ngokuthandabuzekayo endlwini yakhe kwaye Bakhulisa ityala elingenangqondo apho uSanta Claus wabonisa khona ebusuku kwaye wanika intombi yenye yazo, unodoli.
IKrisimesi eyahlukileyo, NguJohn Grisham
Khawufane ucinge unyaka ngaphandle kweKrisimesi.
Akukho zakhiwo zinabantu abaninzi.
Akukho zidlo zenkampani.
Akukho ziikeyiki zeziqhamo.
Akukho zipho zihlekisayo.
Yiloo nto uLuther noNora Krank banayo engqondweni xa bethatha isigqibo sokutsiba imithendeleko kube kanye. Eyabo iya kuba yindlu kuphela kwisitrato iHemlock esingenaSanta Claus eluphahleni, abayi kubamba indibano ye-Christmas Eve, abayi kubeka nomthi kwigumbi lokuhlala. Kwaye abayi kuyidinga, kuba nge-25 kaDisemba bazakuqala uhambo ngolwandle lweCaribbean.
Ukanti esi sibini sineengxaki Uza kufumanisa ukuba ukutsiba iKrisimesi kunemiphumo emibi kakhulu ongakwazi nokubonwa kwesiqingatha sayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Iinoveli ezinkulu ezisibhozo zolwaphulo-mthetho ezibekwe kwiKrisimesi.
Ukukhethwa kwethu kweencwadi ezili-10 ezilungileyo zonyaka ka-2018.